Fiainana antoko : manaitra ny HVM foibe ny any Anosy | NewsMada
Fiainana antoko : manaitra ny HVM foibe ny any Anosy
Nampaneno lakolosy fanairana. « Manaitra anareo mpitarika ny HVM foibe izahay mba hijery akaiky ny toe-draharaha aty amin’ny faritra Anosy. Ahina ho potika io antoko io raha mitohy izao fihetsiky ny tompon’andraikitra sasany izao », hoy ny fanambaran’ireo olon-tsotra manohana ny fitondrana any an-toerana, omaly.
Nohitsin’izy ireo fa tena nivadi-pitokisana ny lehibe ny faritra ary nandiso fanantenana azy ireo. Anisan’izany ny nanofany fiara tsy mataho-dalana telo ka ho azy ny iray raha ho an’ny kabinetrany sy ny vady aman-janany ny roa hafa. Tsy vitan’izany. « Miaraka amin’ny depiote manohitra tanteraka ny fitondrana ary nikasa ny hanongana ny filoham-pirenena ny lehiben’ny faritra. Noporofoiny tamin’ny alalan’ny fanendreny ny ben’ny Tanàna roa ho mpanolotsaina azy izany. Nanentana ny ben’ny Tanàna sy ny mpanolotsaina namany tsy hifidy ny lisitra HVM tamin’ny fifidianana loholona farany teo anefa ireo mpitantana kaominina ireo », hoy izy ireo.
Nanterin’ny fanambarana fa efa manao fampielezan-kevitra sahady isaky ny kaominna tsidihiny ny lehiben’ny faritra fa tsy maintsy hirotsaka hofidina izy. « Na ho kandidà HVM na tsia amin’ny fifidianana lehiben’ny faritra ho avy », hoy ihany izy ireo.
Ho tonga hatraiza ny raharaha tahaka itony any amin’ny faritra itony ?